Забур 81 CARS - Nnwom 81 AKCB
1Monto ahurusi dwom mma Onyankopɔn yɛn ahoɔden;
mommɔ ose mma Yakob Nyankopɔn no!
2Momma nnwom no so na monwosow akasaa.
Mommɔ sanku ne bɛnta dɛdɛ no.
3Monhyɛn mmentia ɔsram foforo da no,
ne ne kurokumatwa mu, yɛn Aponto da no;
4Eyi yɛ Israelfo ahyɛde,
Yakob Nyankopɔn mmara.
5Otintimii sɛ nhyehyɛe maa Yosef
bere a ɔsɔre tiaa Misraim no,
faako a yɛtee kasa a yɛnte ase no.
6Ɔka se, “Miyii adesoa no fii wɔn mmati so,
ne wɔn nsa fii kɛntɛn ho.
7Mo ahohiahia mu mofrɛɛ me na migyee mo,
migyee mo so wɔ aprannaa mu;
mesɔɔ mo hwɛɛ wɔ Meriba nsu ho.
8“Me nkurɔfo, muntie me kɔkɔbɔ yi,
Israel, sɛ mubetie me a!
9Ɛnsɛ sɛ munya anyame foforo bi wɔ mo mu;
ɛnsɛ sɛ mokotow ananafo anyame.
10Mene Awurade, mo Nyankopɔn a
miyii mo fii Misraim asase so no.
Mummue mo anom tɛtrɛɛ na mɛhyɛ mu ma.
11“Nanso me nkurɔfo rentie me;
12Enti migyaa wɔn maa wɔn komaden
sɛ wɔnyɛ nea wɔpɛ biara.
13“Sɛ me nkurɔfo tie me,
na Israel nantew mʼakwan so a,
14anka medi wɔn atamfo so ama wɔn ntɛm
na mama me basa so atia wɔn a wokyi wɔn!
15Wɔn a wɔtan Awurade no de osuro bɛkotow no,
16Nanso wɔde atoko mu atoko papa bɛma mo adi;
mede ɔbotan mu wo bɛma mo amee.”
AKCB : Nnwom 81